Author: Gat Mazum
Maamulka dadweynaha3. In uu arrinta hor-keeno maxkamad xarraantinimeysa hab-dhaqan aan habbooneyn ee sarkaal; 5.
Qodobka aad-Golaha Wasiirada 1 Madaxweynuhu wuxuu magacaabayaa Gole Wasaaradeed aan ka badnayn 23 xubnood oo ay ku jiraan Madaxweynaha iyo Madaxweyne-ku-xigeenku kuwaa oo aan ka mid aheyn xubnaha labada aqal. Bangiga Dhexe ee Federaalka Dhulka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Qodobka A Golaha Adeegga Garsoorka 1 1. Haddii Golaha Wasiiradu ay ansixiyaan, magacyada waxaa loo gudbinayaa Baarlamaanka Federaalka labada aqal Haddii Baarlamaanka Federaalka uu ansixiyo magacyadaas, waxaa loo gudbinayaa Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka, si uu magacaabistooda xeer uga soo saaro.
Xeer-hoosaadka Golaha Shacabka ee Baarlamaanka Federaalka ah 1 Golaha Shacabku ee Baarlamaanka Federaalka ah waa in uu samaystaa xeer-hoosaadkiisa, kaas oo siinaya ka-qaybgal buuxa xubnihiisa. Dib u eegista dastuurka ayaa qodobbada ugu waaweyn ee horyaalla waxaa ka mid ah qeybsiga kheyraadka dalka, hannaanka dowladnimo ee Soomaaliya, maqaamka iyo sida ay noqoneyso caasimadda Muqdisho, iyo nooca federaal ee uu dalka qaadanayo madaama haatan Soomaaliya ay tahay dal federaal ah.
Bannaanaanta Xafiiska Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka 1 Haddii uu bannaanaado xafiiska Madaxweyne, waxaa qabanaya xilka Guddoomiyaha Golaha Shacabka ilaa laga soo dooranayo Madaxweyne cusub muddo aan ka badnayn soddon 30 maalmood gudahood.
Samaynta Guddiyada Madaxa Bannaan Sharci kasta shaqaale iyo hab dhaqan kasta waa inuu waafaqsanaadaa sinaanshaha jinsiga ee goobaha shaqada.
Guddigga Runta iyo Dib-u-heshiisiinta: Xeer-hoosaadka Golaha Shacabka ee Baarlamaanka Federaalka ah Shaqaalaha Dawladda ee Rayidka ah Magacaabista Saraakiisha Darajooyinka Sare Hawlwadeennada iyo Saraakiisaha darajooyinka sare ee Dawladda uu sharcigu tilmaamo waxaa magacaabaya Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya, ka dib markuu arko soo jeedinta Golaha Wasiirrada.
Haddii Baarlamaanka Federaalka uusan oggolaan ama uusan waqti ku darin xaalad degdeg ah, markaa xaaladda degdegga ah ma jireyso. Haddi kale waqtigaas waxaa loo tixgelinayaa in uusan aheyn muddo xileed marka la fiiriyo u jeedooyinka qodobka ee muddo xileedka Madaxweynaha.
Qodobka 97aad-Soo Magacaabida Musharraxa. Cutubka 5aad Dhul, Hanti iyo Degaan.
August 23, Qaadashada wax ka bedelka Dastuurka inta lagu guda jiro muddo xileedka koowaad ee Aqalka Shacab; ansixinta Somaaliya kama dambays ah Qodobka 76aad, faqradiisa 5aad ee dasruurkaas waxaa ku qoran waxyaabaha madaxweynaha lagu maxkamadeyn karo iyo habraaca loo marayo sida khiyaamo qaran.
Xaqa kan waxaa ka mid ah: Nidaamka Doorashooyinka iyo Xisbiyada Shuruucda ku saabsan Xisbiyada, Diiwaangelintooda, Doorashooyinka heerka dowladda federaalka ah iyo Guddiga Qaranka ee Madaxbanaan ee Doorashooyinka, waxaa lagu qeexi doonaa shuruuc gaar ah oo uu soo saaro Golaha Shacabka ee Baarlamaanka Federaalka Soomaaliya.
Dawladaha Xubnaha ka ah Federaalka ee Ka jira Soomaaliya 1 Ilaa inta laga gaarayo goorta dhammaan o Dastuurada dawladaha xubnaha ka ah federaalka la waafajinyo Dastuurka Dawladda soomaalita maamulada jira ka hor inta aan la qaadan Dastuurkan ku meel gaarka sooamaliya waxa ay sii haysanayaan awoodaha Dastuurkoodu siinayo.
Xubnaha Guddiga Xalinta Khilaafaadka. Xaqa Ka-qaybgalka Siyaasadda 1 Muwaaddin kastaa wuxuu xaq u leeyahay in uu ka qayb-qaato arrimaha guud ee dadweynaha. Xorriyadda xirfadda, Shaqada iyo Mihnadda Muwaaddin kasta wuxuu xaq u leeyahay in uu si xor ah u doorto xirfadda, shaqada ama mihnadda uu rabo. Odayaashu waxay sheegeen inay magaalada Garowe ugu laabteen wadatashi inkastoo aanay si rasmi ah u sheegin waxa ay saluugeen haddana waxa muuqata soomaapiya ka biyo-diideen habka uu u socdo maamulka shirwaynaha odayaasha ee ka socda Muqdisho.
Guddiga waa in ahaataa mid loo dhan yahay, waana inay noqotaa dhexdhexaad waana inayna ka badnaan tiro sagaal xubnood ah. Xaqa helidda macluumaadka 1 Qof kastaa wuxuu xaq u leeyahay in uu helo macluumaadka ay Dawladdu hayso. Qodobka aad-Bannaanaanta Xaafiiska Madaxweyne-Ku-Xigeenka Madaxweyne ku-xigeenka haddii uu geeriyoodo, iscasilo ama xilka laga qaado A fhayeenka Golaha Shacbiga ayaa la wareegaya xilkiisa. Magacaabista Saraakiisha Darajooyinka Sare Hareeraha waxaa ka haya laba shabeel oo isu tusmaysan, soomaalya kala taagan labo waran oo isku weydaarsan caaradda hoose ee gashaanka, ayna weheliyaan laba caleen-cawbaar, diillin cadna ay ku qoofalan tahay.
Dhulka 1 Dhulku waa kheyraadka koowaad ee Soomaaliya iyo saldhigga nolosha dadka. Qodobka aad-Dhaarta Madaxweynaha Inta uusan hawsha bilaabin Madaxweynaha Jamahuuriyaddu wuxuu marayaa dhaarta ku xusan sharciga, waxaana lagu hor dhaarinayaa xaflad ka dhacaysa fagaare dadweynuhu joogaanwaxaana dhaarinaya Guddoomiyaha Maxkamaada Dastuuriga.
Calanka iyo Astaanta Qaranka Doorashada Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Ilaalinta Xuquuqda Shaqaalaha Dawladda ee Rayidka ah Xorriyadda Isu-socodka iyo Degitaanka 1 Qof kasta oo si sharci ah ku deggan dhulka Jamhuuriyaddu soo,aaliya xaq u leeyahay in uu si xor ah u degi karo, ugu dhex-socon karo meel kasta oo dalka ka mid ah, kana bixi karo. Xorriyadda Abuuridda iyo Ka-mid-noqoshada Ururrada Golaha Adeegga Garsoorku wuxuu ka koobnaanayaa sagaal xubnood, oo kala ah sida soo socota: Qaybaha soomaaiya dabaqma wax ka beddelka Dastuurka ee lasoo jeediyay ka hor inta aanay dhammaan muddada koowaad ee wakhtigaBaarlamaanka Federaalka ee Soomaaliya: Dastuurka Soomaaliya oo dhamaad ku dhow 16 Maajo Ku-simaha Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Dhaarinta Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Bannaanaanta Xafiiska Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Muddada xilhaynta 1 Muddada xil-haynta Baarlamaanka Federaalku waa afar sano oo ka bilaabata maalinta natiijada doorshada lagu dhawaaqo.
Guddiyada Wadaagga ee Baarlamaanka Federaalka Shaqaalaha Dawladda ee Rayidka dastuurkka 1 Xukuumadda Federaalka iyo Dawladaha xubinta ka ah Dawladda Federaalka waxay shaqaalasanayaan hawl-wadeennadooda. Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya waa madaxa Qaranka iyo xukuumadda, waana astaanta midnimada Qaranka. Cutubka 7aad Qaab-Dhismeedka Federaalka ee Jamhuuriyadda.
Dawladaha Xubnaha ka ah Adstuurka ee Ka jira Soomaaliya Xeer-hoosaadka Golaha Aqalka Sare ee Baarlamaanka Federaalka 1 Golaha Aqalka Sare ee Baarlamaanka Federaalku waa skomaaliya uu samaystaa xeer-hoosaadkiisa, kaas oo ka-qaybgal buuxa siinaya xubnihiisa.
Xorriyadda Abuuridda iyo Ka-mid-noqoshada Ururrada Qof kastaa wuxuu xaq u leeyahay in uu ku biiro qof kale ama koox.
Next story FAMILIA TROGONIDAE PDF
Previous story BRANDON BOYD FROM THE MURKS OF THE SULTRY ABYSS PDF